वरिष्ठ फोनका लागि हाम्रो सेट अप प्रक्रिया - Konnekt
अनप्याक, अनफोल्ड, प्लग इन
निजीकृत र परीक्षण गरिएको
Konnekt सबै हार्डवेयर प्रदान गर्दछ, निजीकरण, सेटअप र तपाइँको लागि परीक्षण Konnekt भिडियो फोन।
केवल हामीलाई तपाईंको सम्पर्कको नाम र नम्बरहरू बताउनुहोस्, र हामी बाँकी गर्छौं! हामी कल बटन र सबै अनुकूलित गर्दछौं अन्य विकल्पहरू.
हामी तपाइँका सम्पर्कहरूलाई जान मद्दत गर्दछौं, र उनीहरूको भिडियो कलि optim अनुकूलित गर्दछौं। हामी डेलिभर गर्न मन पराउँदैनौं जबसम्म हामी निश्चित छैनौं कि सबैजनाको अनुभव उच्च गुणवत्ताको हुनेछ।
केवल यसलाई प्लग इन गर्नुहोस्
बाकस बाहिर भिडियोफोन लिफ्ट।
किकस्ट्यान्डलाई अनफल्ड गर्नुहोस्।
कुनै पनि पावर सकेटमा प्लग इन गर्नुहोस्।
धेरै ग्राहकहरु को लागी, यो हो।
त्यहाँ स्विच गर्न, समायोजित गर्न, वा गलत गर्न केहि छैन।
चार्ज गर्न केहि पनि छैन
तपाईलाई कुनै पनि ब्याट्री चार्ज गर्न, कुनै चीज जडान गर्न वा विच्छेदन गर्न कुनै आवश्यकता छैन। तपाईको भिडियोफोनले केवल कार्य गर्दछ ... नियमित घरको टेलिफोन जस्तै, तर सजिलो।
माथि गर्न केहि पनि छैन
Konnekt भिडियोफोनको "असीमित कल" सदस्यता सदस्यता।
धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरूको लागि, भिडियोफोन कम टेबलमा "मनपर्ने कुर्सी" छेउमा बस्दछ। हामी पनि सक्दछौं सिफारिस गर्नुहोस् वा एक सानो कडा तालिका आपूर्ति। एक पटक तपाईं स्थिति संग खुसी, हाम्रो Adhesive क्ल्याम्प प्रयोग गरी किकस्ट्यान्ड मा छडी।
केहि भडियोफोनले भित्तामा सवार हुन्छन त्यसैले यसलाई सम्पूर्ण कोठा देख्न सकिन्छ। Konnekt सिफारिश वा एक कोष्ठक वा एक लचिलो हात आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोफोन पनि गर्न सक्दछ कुर्सी वा ओछ्यानको फ्रेममा माउन्ट गर्नुहोस्। केही देशहरूमा, हामी अनुकूलन स्थापना प्रस्ताव गर्दछौं।
स्वचालित रूपमा जडान गर्दछ
हामी तपाईंको Wi-Fi / Internet मा जडान गर्नको लागि भिडियोफोनलाई पूर्व कन्फिगर गर्दछौं। वैकल्पिक रूपमा, यसलाई कुनै पनि मोडेम / राउटरमा प्लग गर्नुहोस्। वा हाम्रो Wi-Fi मा कुरा गर्न सेट अप गर्न हाम्रो साधारण गाइड प्रयोग गर्नुहोस्। सहयोग चाहियो? हामी तपाईं (वा तपाईंको साथी) सेटअप मार्फत कुरा गर्छौं, तपाईं जहाँ भए पनि फरक पर्दैन।
इन्टरनेट छैन? हामी तपाईंलाई उपयुक्त सेवा चयन गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं। भिडियोफोनले कतै डाटा प्रयोग गर्दछ र 3G / 4G मोबाइल (सेलुलर) इन्टर्नेट, ADSL, अप्टिकल वा केबल सहित कुनै पनि इन्टरनेटको साथ काम गर्दछ।
धेरै देशहरूमा, हामी तपाईंलाई एक विशिष्ट इन्टरनेट सेवा र अधिकतम विश्वसनीयता र भिडियो गुणवत्ताको लागि एक रक-ठोस मोडेम राउटरको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं।
जहाँ निश्चित इन्टरनेट व्यावहारिक हुँदैन, र छोटो अवधिको भाँडा / परीक्षणहरूको लागि, हामी तपाईंलाई 4G मोबाइल (सेलुलर) इन्टर्नेटको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं र हामी पूर्व-कन्फिगर गरिएको मोबाइल (सेलुलर) इन्टर्नेट मोडेम राउटर सिफारिस वा आपूर्ति गर्न सक्दछौं। प्लग इन र जानुहोस्!
म्यानुअल रूपमा वाइफाइमा जडान गर्न सजिलो छ।
धेरै जसो केसहरूमा हामी गर्न सक्दछौं पूर्व कन्फिगर गर्नुहोस् भिडियोफोन तपाईंको Wi-Fi मा स्वचालित रूपमा जडान गर्न, ताकि गर्न बिल्कुल कुनै सेटअप छैन।
वाइफाइ वा वायर्ड
यदि भिडिओफोन एक वा दुई कोठा भन्दा टाढा छ भने वाइफाइ मोडेम राउटर हो, वा जहाँ कडा हस्तक्षेप छ, हामी सिफारिस वा वाई-फाई विस्तारक आपूर्ति गर्न सक्छौं जसले तपाईंको Wi-Fi संकेतलाई बढावा दिनेछ भिडियो कलिंग गुणस्तर सुधार गर्न। । हामीलाई थाहा छ कि के काम गर्छ र के उपकरणहरूमा निरन्तर ध्यान आवश्यक छ, त्यसैले कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईंले Wi-Fi विस्तारक चयन गर्नु अघि।
भिडिओफोनले केवल ल्याम केबल, वाइफाइ (सजिलैसँग कन्फिगर गरिएको वा हामीद्वारा पूर्व-कन्फिगर गरिएको), वा एक्स्टेन्डरको प्रयोग गरेर मोडेम / राउटरमा जडान गर्दछ। यसको मतलव तपाईको भिडियो फोन प्राय: तपाईले चाहानु भएको कुनै पनि कोठामा अवस्थित गर्न सकिन्छ। हामी चित्रहरू सहित एक सजिलो गाइड समावेश गर्दछौं, र हामी सेटअप मार्फत तपाईं वा तपाईंको साथी / नातेदारसँग कुरा गर्न समय मिलाउन सक्छौं। धेरै जसो अवस्थाहरूमा हामी भिडियोफोनलाई केवल वाइफाइ मार्फत जडान गर्नको लागि कन्फिगर गर्न सक्दछौं जुन गर्नको लागि त्यहाँ कुनै सेटअप छैन। केवल अनडबक्स भिडियोफोन र यसलाई पावर आउटलेटमा प्लग गर्नुहोस्!
IT समर्थन, कहिँ पनि
हामी फोनमा वा स्काईप, पाठ, अनलाइन च्याट वा ईमेल मार्फत पूरा आईटी समर्थन प्रदान गर्दछौं। चाहे तपाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया, एशिया-प्रशान्त, बेलायत / युरोप वा अफ्रिका, हामी मद्दत गर्नेछौं। खराब अंग्रेजी? हामी अफ-द-शेल्फ अनुवाद अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दछौं जुन आश्चर्यजनक रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछन्।
तपाईं हुनुहुन्छ भने एक Konnekt भिडिओफोन ग्राहक, प्रयोगकर्ता वा सम्पर्क, हामी तपाईंको उपकरणहरू र ईन्टरनेटलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्दछौं तपाईंलाई इन्टरनेट समस्याहरूबाट बच्न वा कम गर्नमा मद्दत गर्न। यो तपाईंको भिडियोफोन वा इन्टरनेट हो, वा (वा तपाईंको परिवारको सदस्य वा सम्पर्कको), एकल Konnekt कल गर्न नम्बर एक स्टप मद्दत प्रदान गर्दछ।
हाम्रो सम्पूर्ण दर्शन सबै चीज सजिलो र भरपर्दो बनाउनु हो। हाम्रा धेरैजसो ग्राहकहरू छोरा, छोरी वा स्याहारकर्ता हुन् जो अन्तरराज्यीय वा विदेशमा बस्छन्, जसले ग्याजेटको दास हुन चाहँदैनन् वा गर्न सक्दैनन्। हामीले बुझ्यौं। हाम्रा ग्राहकहरु संसारभरि हाम्रो सेवाबाट खुशी छन्। ग्राहकहरु के भन्छन् पढ्नुहोस्.